ड्राइभरले सोध्लान्- केपी ओलीलाई भोट किन नदिएको ! म एमाले र माओवादीको प्रधानमन्त्री होइनः ओली - sandeshpost
Home > राजनीति > ड्राइभरले सोध्लान्- केपी ओलीलाई भोट किन नदिएको ! म एमाले र माओवादीको प्रधानमन्त्री होइनः ओली
ड्राइभरले सोध्लान्- केपी ओलीलाई भोट किन नदिएको ! म एमाले र माओवादीको प्रधानमन्त्री होइनः ओली
March 11, 2018 admin84
२७ फागुन, काठमाडौं । आइतबार अपरान्ह ३ बजेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक साँझ ६ बजेपछि प्रधानमन्त्रीको विश्वास/अविश्वासको भोटिङमा बदलियो । त्यसअघिसम्म बिहानै मात्र सपथ खाएका सभामुख कृष्णबहादुरले विभिन्न दलका नेतालाई रोष्टममा बोल्न दिए ।
तिन महिनाको नानीसगै दिदीको घर जान्छु भनी हिडेकी महिला हराईन् (पुरा जानकारी सहित)
श्रीमान बिदेश भएकी महिलालाई बलात्कार गर्न खोज्नेलाई जुत्ताको माला र २… (123)
सैफअलि खान की छोरीले नेपाली बोल्दै नेपाली दर्शकलाई यस्तो भनेपछि… (78)
भगवानका पाला देखिनै यौन सम्पर्क गर्ने सयौ तरिका भए पनि महिलाहरूलाई मन… (27)